Odayaasha K/Galbeed oo sheegay in xayiraadda uu Farmaajo saaray Shariif ay caddeyn u tahay hal arrin | SMC
Home WARARKA MAANTA Odayaasha K/Galbeed oo sheegay in xayiraadda uu Farmaajo saaray Shariif ay caddeyn...
Odayaasha K/Galbeed oo sheegay in xayiraadda uu Farmaajo saaray Shariif ay caddeyn u tahay hal arrin
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo maanta shir ku yeeshey magaalada Baydhaba ayaa aad u canbaareeyey talaabadii madaxweyne Farmaajo uu xayiraadda ku saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Odayaasha Koonfur Galbeed ayaa Shariif Sheekh Axmed ku tilmaamay oday Soomaaliyeed oo nabaddoon ah, aadna u dulqaad badan, waxayna tallaabada uu Farmaajo qaado ku qeexeen mid caddeyn u ah “sida uu u abaal-dhacay”, sida ay hadlaka u dhigeen
“Waa nasiib darro aad u weyn in Farmaajo uu ka xishoon waayo ninkii isaga Mareykanka ka keeney oo ra’iisul wasaare ka dhigey” ayey yiraahddeen odayaasha Koonfur Galbeed.
Odayaasha ayaa sheegay in dhaqanka Farmaajo uu shabaho mid horey loo arkay. “Tani waxay caddeyn u tahay in Farmaajo uu rabo inuu dalkaan ku hoggaamiyo wixii shaley ay Soomaali isku dagaashey lagamana yeelaayo taasi” ayey yiraahdeen odayaasha.
Dhinaca kale, odayaasha Koonfur galbeed ayaa sheegey inay ka aqbaleen raali gelintii uu madaxweyne Shariif u sameeyey reer Koonfur Galbeed, ugana mahad-celinayaan.
Previous articleXOG: Sheikh Shariif & Xasan Sheikh oo dardar gelinaya qorshahooda Afgambiga DF
Next articleSomalia still dangerous to stay, UK tells citizens in new advisory